अजय देवगनकि छोरीले आफ्नो जन्मदिनमा कालो ड्रेसमा वाइन गिलास समातेको तस्बिर एकाएक भाइरल – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal शुक्रबार, बैशाख ०९, २०७९
अजय देवगन र काजोलकी छोरी न्यासा देवगन भर्खरै १९ वर्षको भएकी छन्। युवा स्टार किड हाल स्विट्जरल्याण्डमा अध्ययनरत छन् र अर्को वर्ष सूर्यको परिक्रमा गरिसकेपछि, न्यासाले आफ्ना साथीहरूसँग विशेष दिन मनाइन्। न्यासाको जन्मदिनको विषयवस्तु ग्ल्याम ब्ल्याक थियो जस्तो देखिन्छ किनभने युवा दिवा सबै बाहिर गए र ग्ल्याम अप थिए। न्यासा को बलिउड योजनाहरु को बारे मा कुनै शब्द छैन, यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल मा उनको पहिले देखि नै ठूलो फ्यान फलोइङ को मजा लिइन्छ।
यी फ्यान क्लबहरू र सोशल मिडिया फ्यानहरूमा फ्यानहरूलाई धन्यवाद, हामीले नदेखेका तस्बिरहरू विरलै छुटेका छौं। हामीले न्यासाको यस्तै एउटा तस्बिरमा ठोक्क्यौं, सम्भवतः उनको भर्खरको जन्मदिनको पार्टीबाट। तस्बिरमा, न्यासालाई कालो रंगको लुगा लगाएको देख्न सकिन्छ जसमा कालो ब्रालेट र कालो छालाको प्यान्ट समावेश थियो। जब उनले आफ्नो कपाल तल छोडिन्, न्यासाले पोइन्ट मेकअपको साथ ग्ल्याम अप गरिन् र उनको पोशाकलाई राम्रोसँग एक्सेस गरिन्।
तस्विरमा, उनी आफ्नो साथीसँग पोज दिँदै देखिएकी थिइन जब उनीहरूले आफ्नो वाइन गिलास समातेका थिए र कालो ड्रेसमा थिए। उनको जन्मदिनमा, न्यासाकी आमा र अभिनेत्री काजोलले आफ्नी छोरीको लागि शुभकामना दिए। एउटा प्यारो थ्रोब्याक तस्बिर सेयर गर्दै काजोलले लेखेकी छिन्, “ह्याप्पी बर्थडे बेबी। तिम्रो मुस्कानले मेरो जस्तै संसारलाई सधैं उज्यालो बनाओस्।
यसैबीच काकी तनिषा मुखर्जीले पनि न्यासासँगको मिठो तस्बिर सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, “ह्याप्पी बर्थडे मेरी न्यासा केटी! मेरो शानदार १९ वर्षकी बूढो! हरेक वर्ष तिमी मेरो लागि अझ उल्लेखनीय बन्छौ र म तिमीलाई फेरि भेट्न र मेरो अङ्गालो पाउनको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दिन। तिमीले मात्र सक्छौ! लभ यू बेबीलाई राम्रो होस्!